ड्रेस–कोड दुरुपयोग गर्नेसहित सबैमा होलसेल शुभकामना !
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिड्रेस–कोड दुरुपयोग गर्नेसहित सबैमा होलसेल शुभकामना !
आज ३०औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । यस अवसरमा कन्टिर–बाबू सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई शुभकामना दिन्छन् । खाँटी पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई त कन्टिर–बाबूको शुभकामना छँदै छ, जो पत्रकार होइनन् तर प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षपाती भने हुन्, तिनलाई पनि शुभकामना छ ।
यतिमात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रतालाई शत्रु ठान्ने नेपाल सरकारमा सामेल भएका कतिपय व्यक्तिमा पनि माता जानकीका कृपाले सद्बुद्धि पलाओस् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जनताको अधिकारसहित लोकतन्त्रको संवर्धननमा जुट्न मन लागोस् भन्ने शुभकामना दिन्छन् कन्टिर–बाबू ।
हाम्रा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू समाचार सम्प्रेषणमा ‘पहिलो’ हुनुभन्दा सत्यता र निष्पक्षतामा पहिलो भएर काम गरुन् ।
त्यसो त कन्टिर–बाबूले, केही सरोकारवालाले ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस शुभकामना आदान–प्रदान गर्ने दिन हो र ? यो त राज्य र प्रेस दुवैले स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने र आदर गर्ने प्रण लिने–दिन हो,’ भनेको सुनेका छन् । कन्टिर–बाबू यो विचारसँग सहमत छन् ।
अरे यार, प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्य र सरकारबाट सधैँ नै समस्या हुन्छ भनिन्छन् । प्रेसलाई सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष भन्ने गरिएबाट पनि यसको सुरक्षा संवेदनशीलताको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– प्रेसलाई सरकार र अन्य अवाञ्छित तत्वबाट मात्र खतरा हुँदेन । कहिलेकाहीँ प्रेसलाई आफैँ, आफ्नाजस्ता लाग्ने काम गराइबाट पनि खतरा हुन्छ । प्रेस लेखेको भेस्ट लगाएर फ्रेस टमाटर बेच्न बाइकमा जाँदै गरेका श्रमजीवीबाट पनि खतरा हुनसक्छ ।
यदि ड्रेस–कोडको दुरुपयोग भएको हो भने यस्तै दुरुपयोगबाट विश्सनीयताको खतरा देख्छन् कन्टिर–बाबू ।
त्यसो त कन्टिर–बाबू त्यस्ता भाइ–बहिनीहरूलाई पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको होलसेल शुभकामना दिन चाहन्छन् । तर प्रेस लेखेर मोटरसाइकलमा आलु–टमाटर बेच्नेहरूको छानबिन हुनु र दोषी देखिए कारबाही हुनु जरूरी ठान्छन् ।
यसमा ती भाइले फ्रेस टमाटरको उत्पादन, बजारीकरण र कालोबजारीको रिपोर्टिङ गरेको पनि हुनसक्छ अथवा साँच्चै प्रेस ड्रेस–कोडको दुरुपयोग गरेको हुनसक्छ । यदि ड्रेस–कोडको दुरुपयोग भएको हो भने यस्तै दुरुपयोगबाट विश्सनीयताको खतरा देख्छन् कन्टिर–बाबू ।
प्रेस निश्चित पनि शक्तिशाली छ । हो यही शक्ति देखेर जल्नेहरू ह्वार–ह्वार्ती जल्छन् । यो प्रसङ्गमा कन्टिर–बाबू नेपोलियन बोनापार्टले भनेको सम्झन्छन्– पत्रकार, टीकाकार, सल्लाहकार र चुक्लीकार बादशाहका प्रतिनिधि तथा राष्ट्रका शिक्षक हुन्छन् । चारवटा विरोधी–पत्र चार हजार सङ्गीनभन्दा बढी डरलाग्दा हुन्छन् ।’
तर हजुर … ‘डरलाग्दो’ हुन त पत्रकार पनि पत्रकार नै हुनुपर्‍यो नि ! पर्चाकार, चाटुकार, चुक्लीकार, आचारसंहिता मिचाहाकारहरूबाट के अपेक्षा गर्नु ?
कन्टिर–बाबू कुराको बिट मार्दै भन्छन्, हाम्रा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू समाचार सम्प्रेषणमा ‘पहिलो’ हुनुभन्दा सत्यता र निष्पक्षतामा पहिलो भएर काम गरुन् । त्ययसका लागि कतैबाट कुनै भाँजो नआओस् । पुनः एकपटक सबैमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना !
दुरुपयोग प्रेस स्वतन्त्रता
ओल्बाको ‘भेज’ सम्बोधन, नयाँ चुनावी रणनीति !